Tsipy kanetibe : hiadiana eny Ivato ny «Tournoi des entreprises» | NewsMada
Tsipy kanetibe : hiadiana eny Ivato ny «Tournoi des entreprises»
Hotanterahina, ny 1 mey izao, eny amin’ny «boulodrome»-n’ny Auberge du cheval blanc Ivato, ny «Tournoi des entreprises», taranja tsipy kanetibe. Fifaninanana efa fanaon’ny Rotary Club d’Ivato. Nambaran’i Gérard Naturel, anisan’ireo mpikambana, tamin’ny fihaonany tamin’ny mpanao gazety omaly, fa misokatra ho an’ny rehetra ny lalao rehefa mpiasa ao anatin’ny orinasa. Lalao natao ho an’olon-telo miaraka ilay izy ary 250.000 Ar, isaky ny ekipa, ny saran’ny fandraisana anjara. Hahazo loka avokoa ireo ekipa efatra tonga eo amin’ny manasa-dalana.
Ankoatra izay, ny ekipa resy eo amin’ny fifanintsanana, mbola manohy ny fihaonana ka miatrika ny «Tournoi des consolantes» ka hahazo loka ihany koa ireo ekipa roa manao ny famaranana. Hisy ihany koa ny loka homena ny ekipa mandray anjara tsy tapaka sy ho an’ny orinasa manana mpandray anjara be indrindra. Hampiavaka ity andiany 2016 ity ny fisian’ny «coupe des challenges» hiadiana intelo ka hahazo izany tanteraka izay mandrombaka azy misesy na mifanelanelana.
Tanjon’ny Rotary Club d’Ivato, tarihin’Andriamampihavanaharinesy Vonjy, fa tanjon’ity fifaninanana ity ny fitadiavam-bola, amin’ny asa fanasoavana eo amin’ny sehatry ny fampianarana ataon’ny fikambanana, amin’ireo faritra manodidina an’Ivato sy Ambohidratrimo. Amin’ity, ny EPP Ambohidratrimo no ampian’ny Rotary Club d’Ivato. Marihina fa efa nahazo fanohanana toy izao, tamin’ireo taona efa lasa, ny Don Bosco, ny EPP Mamory sy Talatamaty ary lycée Ivato.